Ny 'Fodiana ao amin'ny maizina' dia mahataitra sy tsy miato - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Miverina ao amin'ny maizina' dia manaitra sy tsy miato mihitsy
'Miverina ao amin'ny maizina' dia manaitra sy tsy miato mihitsy
Ity horonantsary ity dia coaster roller feno fanentanana tanteraka
by Trey Hilburn III Aogositra 5, 2021
by Trey Hilburn III Aogositra 5, 2021 20,407 hevitra
Afaka nahita aho Mody ao anaty haizina tao amin'ny Festival Film Chattanooga. Nahagaga ny indroa ny fizahana tamin'io alina io. Indray mandeha satria ilay fandefasana miafina goavambe sy sarimihetsika fanidiana alina, ary ny roa dia fijanonana tsy misy fijanonan'ny hadalana tsy miato. Eritrereto, The Hitcher. Saingy, tsy misy toerana hiainana. Ny tranofiara farany farany dia mahay maneso ny sarimihetsika nefa tsy manome be loatra.
Ny synopsis ho an'ny Mody ao anaty haizina mandeha toy izao:
Ny fidinan'ny fianakaviana tamina morontsiraka mitokana dia nanjary horohoro rehefa tonga tampoka ny mpampianatra sekoly ambaratonga faharoa Alan 'Hoaggie' Hoaganraad, ny vadiny Jill, ary ny stepons Maika sy i Jordon sendra mpamily enta-mpamono olona - ilay psychopath mandrake manaitaitra sy ilay lehilahy mahery Tubs mpiray tsikombakomba amin'ny ankizy - izay nanosika azy ireo hitsangatsangana an-dalambe. Tamin'ny voalohany, ny fampihorohoroana ao amin'ny fianakaviana dia toa nateraky ny fihaonana tampoka tamina sociopaths roa, rehefa nihalalina ny alina, dia tsapan'i Hoaggie sy Jill fa io nofy ratsy io dia napetraka 20 taona talohan'izay; ary rehefa manakaiky ny toerana farany miafiny miafina izy ireo, Mandrake dia nanambara ny tsiambaratelo mahatsiravina nitondra ny asany.
Mody ao anaty haizina mahavita mamoaka anao amin'ny tendanao manomboka amin'ny minitra ka hatramin'ny minitra. Tsy lalaovin'ny lalàna izany ary manjary manjary maizina avy eo. Tsy horonantsary henjana henjana na koa mavesatra ny lanjany ao amin'ny departemantan'ny teti-dratsy, tokony ho hitanao.
Mody ao anaty haizina tonga amin'ny teatra voafantina sy amin'ny nomerika sy VOD manomboka amin'ny 1 Oktobra.
Inona ny sarimihetsika maizina feno habibiana hitanao tato ho ato? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.